Waqtigan xaadirka ah, xaaladda ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa ee Gobolkeennu waa mid aad u daran, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa doorta inay sameeyaan nukliyeerka iyagoo isticmaalaya kharashkooda. Si loo hubiyo badqabka shaqaalaha iskana ilaaliyo infekshinka iskutallaabta ah ee ay keento baaritaanka dhexe, Janaayo 15, 2021,Beyin xirxiraya Waxay u sameysay shaqaalaha tijaabo tijaabo ah nukliyeer acid iyada oo iska bixineysa kharashka si loo abuuro jawi shaqo oo aamin ah shaqaalaha.
8 saac ee subaxnimo 15, shaqaalaha Beyin xirxirida ayaa yimid Waaxda Tijaabada Nucleic Acid ee Degmada Jingxiu. Kormeerayaashu waxay qaadeen tallaabooyin adag oo ilaalin ah. Shaqaalaha shirkadda waxay u yimaadeen isbitaalka heerar kala geddisan xilliyado kala duwan waxaana lagu kala soocay hal mitir oo saf loogu jiray sambal qaadista. Amarka shaqaalaha goobta, shan qof ayaa soo galay goobta baaritaanka iyagoo dufcad ah. , Shaqada muunad qaadista ayaa nidaamsan.
"Shirkaddu waxay u baahan tahay inay si firfircoon gacan uga geysato ka hortagga iyo xakamaynta aafada, isla markaana mas'uul ka ah shaqaalaha iyo bulshada." Ayuu yiri Adam, madaxweynaha Beyin xirxirida, shaqaalaha dhammaantood waxay dareemayaan in shirkaddu ay soo abaabushay baaritaankaan Nucleic Acid uu qof walba siinayo ammaan. hubin. Intaa waxaa dheer, xirxirida Beyin. si cilmiyaysan ayay hawlaheeda uga hortagtaa arrimaha kahortaga cudurrada faafa. Warshadda iyo xafiiska jeermiska dila laba jeer maalintii. Sunta jeermiska iyo maaskaro-waji-dhigga ayaa la dhigaa xafiiska iyo warshadda si loogu diyaariyo keydka qalabka ka hortagga cudurrada iyo qorshooyinka deg-degga ah. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in shaqaaluhu la yimaadaan qadadooda. Iskuday inaadan raacin gaadiidka dadweynaha markaad shaqada ka tagto, oo aad u dhisto "gidaar-dab-demis" oo loogu talagalay ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada dhammaan dhinacyada.
Ninka weyn waa qofka masuuliyada bulshada u qaada. Waqtigaan la joogo waa xilli xasaasi ah oo looga hortagi karo iyo xakamaynta cudurada faafa, taas oo tijaabo u ah dhamaan shirkadaha. Waxaa la rajeynayaa in dhammaan shirkadaha ay si firfircoon u gudan karaan waajibaadka ka saaran arrimaha bulshada isla markaana ay u fidiyaan taageero xooggan ka hortagga cudurrada faafa. Waxaan aaminsanahay inaan si dhab ah u guuleysan doono cudurkan faafa!